China Cyromazine Poison hamonoana mpamokatra sy mpamatsy lalitra | Senton
Poizina Cyromazine hamonoana lalitra
Bika Aman 'endrika:manjelanjelatra.Mangatsakatsaka
Anaran'ny vokatra Cyromazine
Bika Aman 'endrika manjelanjelatra.Mangatsakatsaka
Fomba simika C6H10N6
Molar faobe 166.19 g / mol
Teboka mitsonika 219 hatramin'ny 222 ° C (426 hatramin'ny 432 ° F; 492 hatramin'ny 495 K)
Cyromazine poizina be mpampiasa hamono lalitra. Vovoka fotsy io. Izy io dia misy mpanelingelina fitomboana izay mihetsika manokana manohitra ny olitra rehetra, ka mety ho usd koa izy Famonoan-tena SY Famonoan-tena ho an'ny olon-dehibeMora ampiasaina,tsy misy poizina manohitra mammil, ary lozisialy granular malaky anaty rano izay azo hafafy mivantana amin'ny rano na esorina aorian'ny diloilo ao anaty rano. Ity fitsaboana ity dia mampiato ny fivoaran'ny olitra izay manapaka ny tsingerin'ny lalitra ka hofongorana ireo lalitra. Ny lozisialy Maggots dia manome vokatra maharitra ary azo antoka ampiasaina amin'ny biby fiompy. Misy vokany izanyFanaraha-maso ny bibikely.
Bibikely miavaka ity vokatra ity fitomboana mifehy reagent. Mety ho toy ny additive feed io, izay mety hampiato amin'ny fomba mahomby ny fitomboan'ny bibikely amin'ny ambaratongany. Satria mifantina fatratra ny fomba fiasan'ny singa mavitrika, dia mety tsy hanisy ratsy ny bibikely mahasoa fa ny bibikely toy ny lalitra. ampiasaina amin'ny karazana toeram-piompiana ho toy ny additive feed mba hifehezana ny fitomboan'ny lalitra. Manana ny mampiavaka ny fahombiazana, fiarovana, tsy misy poizina izy io, tsy mandoto ny tontolo iainana, ary tsy mifanohitra amin'ny fanafody hafa. Noho izany, mety hifehezana amin'ny fomba mahomby amin'ny fanoherana mahatohitra izany.Ny orinasanay dia orinasam-barotra iraisam-pirenena matihanina ao Shijiazhuang. Raha mbola miasa io vokatra io izahay dia mbola miasa amin'ny vokatra hafa ny orinasanay, toy ny White Azamethiphos vovoka, Hazo voankazo kalitao tsara Famonoana bibikely, Famonoana bibikely haingana Cypermethrin, Mazava mavo Methoprene ranon-javatra and sns.Raha mila ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay, homenay anao ny vokatra sy serivisy kalitao.
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy lalitra tsara i Cyromazine? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Ny vovoka fotsy rehetraCyromazine famonoana bibikelyazo antoka kalitao. Izahay dia orinasa niandohan'i Sina momba ny fanaraha-maso ny bibikely. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Cyromazine amin'ny akoho amam-borona
Famonoana bibikely Cyromazine
Cyromazine dia mampiasa amin'ny akoho amam-borona
Cyromazine famonoana bibikely
Mpanara-dalàna momba ny fitomboan'ny biby sy ny bibikely
Pesticide famonoana bibikely agrochemical mahomby Cy ...
Vovoka fotsy hifehezana ny lalitra Cyromazine
Cyromazine ho mpandrindra fitomboan'ny bibikely